से, क्स पा वर बढाउने भि यग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले हानी गर्छकी गर्दैन ? - नेपाली खोज
काठमाडौं । भि यग्राले से, क्स पा वर बढाउने दाबी गरिन्छ । यसको सेवनले यौ न दू र्वलताको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन्छ । यौ न दू र्वलता भएकाहरुलाई यसको सेवन हीनताबोधको अन्त्य गराउँछ ।
भिया ग्रााको सेवनले यौ नांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यौ नेच्छा जाग्छ, तब पुरुषको यौ नांगमा रगत प्रवाह गर्ने धमनी खुल्ला हुन्छ भने रगत फर्काएर लाने शिरा खुम्चिन्छ। यसको परिणाम स्वरूप यौ नांगमा पर्याप्त मात्रामा चाप पैदा भई यौ नांग लामो र कडा हुने बताइन्छ ।
उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेका तथा एचआईभीको औषधि सेवन गरिरहेकाले भि यग्रा खानु हुँदैन । मुटुको औषधि खाइरहेका, यौ न सम्पर्क राखेमा हृदयाघातको जोखिममा रहेका, कडा खालको कलेजो तथा मिर्गौलाका रोगी, हालसालै मस्तिष्कघात तथा हृदयाघात भएका व्यक्तिले भि याग्रा सेवन गर्नै हुँदैन।
यसैबीच फोक्सोको रक्तचाप बढेमा, उच्च लेकको रोकथाम तथा उपचारमा पनि भि यग्राको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । यद्यपी यौ न दू र्वलता तथा अन्य समस्या भएकाहरुले आफू खुसी भियाग्रा खानु भन्दा चिकित्सको सल्लाह बमोजिम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
फिलिपिन्समा ६.६ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, घरहरुमा क्षति
नुवाकोटको जङ्गलमा दुईनाल बन्दुकसहित पाँच पक्राउ